पूर्वाञ्चल बिश्वबिद्यालयको कार्यालय सार्न दिदैनौ - Birat Post
०४ आश्विन २०७७, आइतबार
» अन्तर्वार्ता अंक: 2990
समुन्नत महानगर र विराटनगरको पक्षमा अन्तिम लडाइ लड्दै छौ
Birat Post सोमबार, फाल्गुण २६, २०७६ मा प्रकाशित
नेपाली कांग्रेस विराटनगर महानगरका ,कार्यबाहक नगर सभापति अरुण न्यौपाने युवाहरुमाझ लोकप्रिय र इमान्दार युवा नेताकोरुपमा स्थापित नाम हो । वि.स २०४६ सालको जनअन्दोलनमा सरिक भए संगै आफु राजनीतिमा होमिएको न्यौपाने बताउनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्य लिइ वडास्तरको राजनीतिमा सक्रिय उहाँ वि.स. २०६७ मा भएको काग्रेसको १२ औ महाधिवेशन बाट नगर सदस्य पदमा निर्वाचित र वि.स. २०७२ मा भएको १३ महाधिवेसनवाट नगरको उपसभापति पदमा मनोनित हुनुभएको थियो । युवा माझ लोकप्रिय र नगरक्षेत्रमा सामाजिक व्यक्तित्वको छवी बनाउनु भएका नेपाली कांग्रेस विराटनगर महानगरका कार्यबाहक सभापति अरुण न्यौपाने संग गरिएको कुराकानी :
दुइतिहाइको सरकारलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
नेकपाको सरकार आफै झुटमा खडा भएको सरकार हो । राष्ट्रियता र समृद्धिको झुटो आश्वासन देखाएर सत्ताको सिडि चढ्न तत्काल सफल भए पनि सरकार बनेको समय यता हेर्दा २ बर्षको अबधिमा यो सरकारले जनतालाई केबल भ्रष्टाचार ,बलत्कार र तस्करी र मफियासंगको मेलेमतो गरी कमाउ धन्दा बाहेकका केही काम गरेको देखिदैन । जो घाम जतिकै छर्लङ छ । यसको मूल्याङन सम्पूर्ण नेपाली जनताले गरिरहेका छन् । जुन आगामी निर्वाचनमा देखिने छ ।
प्रतिपंक्षि भूमिकामा कांग्रेस कमजोर देखिएको छैन ? यसका लागि कांग्रेस नगरले के काम गरिरहेको छ ?
कांग्रेस एउटा देश ,जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफ देहिता दिएको पार्टी हो । प्रतिपक्ष भन्ने बित्तिकै रेलिङ तोड्ने ,चक्काजाम गर्ने ,बन्द हड्ताल गर्ने भन्ने आम मानसिकता छ त्यो अनुरुप हामीले काम नगरेकै हो । हामी जनता प्रति जिम्मेबार छौ । जनतालाई दुःख दिने काम हामी गर्दैनौ । सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको बिधिपूर्वक सडक र सदन दुवै ठाउँवाट विरोध गरिरहेका छौ । कांग्रेसवाट संसदमा सहभागी हाम्रा नेताहरुलाई हामीले त्यहि अनुसार लडाइ लड्न बेला बेलामा अपिल समेत गरेका छौ ।
जनतामा कसरी पुगिरहनु भएको छ ?
जनताको सुख दुःखको सहयात्री बन्ने प्रयास हामिले गरेका छौ । मेरो जिम्मेवारी नगर भित्रको भएको हुदा यहाँ भित्र हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र जनताको सुख दुःखमा प्रतक्ष्य सहभागिता जनाइरहेका छौ । साथै सरकारले गरेका हरेक गलत क्रियाकलापको पनि जानकारी आम जनतामा गराइरहेका छौ ।
महानगरको बिकास क्रमलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
निश्चय पनि विराटनगर महानगर बन्ने क्रमममा छ । समय अनुसार समाज रुपान्तरण भइरहेको छ । विराटनगरले पनि काचुली फेर्दै छ । यहाँ भइरहेको बिकासको गति राम्रो छ । भएका राम्रा कामको हामी सवैले खुलेर प्रशंसा गर्नु पर्दछ । विराटनगरमा भइरहेको विकास क्रम संग म सन्तुष्ट छु । अझै यहाँको बिकासका लागि दलगत स्वाथ्र्य भन्दा माथी उठेर हामीले काम गर्नु पर्दछ । विकास कुनै पार्टी वा व्यक्तिका लागि हैन समाज रुपान्तरणका लागि हो भन्ने बुझ्न सकियो भने काफी हुन्छ ।
महानगरको महत्वपूण अंङ्ग पूर्वाञ्चल बिश्वविद्यालयको कार्यालय गोठगाउँ सरेको छ ? के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । मैलै भन्ने पर्ने हुन्छ । महानगर हुन आबश्यक पूर्वाधार मध्ये एउटा महत्वपूण कुरा विश्वबिद्यालय पनि हो । महानगर भन्ने र भएको बिश्वविद्यालयको कार्यालय पनि अन्यत्र सार्ने हो भने महानगरको के अर्थ हुन्छ ? कार्यालय सार्ने यसखाले कार्यको हामीले विरोध गर्ने काम गरेका छौ । पहिलो चरणमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएका छौ भने सम्वन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौ । नगरवासीलाई समेत अपिल गरेका छौ ।
विरोधको स्वर नपुगे जस्तो छ ,के यो निर्णयलाई रोक्न सक्नुहुन्छ ?
लोकतन्त्रमा एक जनाले गरेको विरोधको पनि महत्व हुन्छ । यस विषयमा हामी नेपाली कांग्रेस विराटनगर नगर समिति ,विराटनगरका नागरिक अगुवा,समाजवादी पार्टी लगायतको सहभागितामा बिरोध जनाएका छौ । समय आए पछि बिरोधको स्वर पुग्छ । हामीले उठाएका जायज मागहरु समयमै पुरा नगरे हामी आन्दोलनमा उत्रन्छौ । यो निर्णयलाई जसरी पनि उल्टाउने हिम्मतका साथ काम गरिरहेका छौ । हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर नठान्न पनि म आग्रह गर्दछु ।
बिश्वविद्यालयको कार्यालय यथावत राख्ने खालको आन्दोलन कहिलेबाट गर्नु हुन्छ ? आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?
यस विषयमा हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौ । पहिलो चरणमा हामीले सम्वन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौ भने दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तरगत हामी यस महानगर भित्रका शिक्षक संघ,निर्वाचित जनप्रतिनिधि,प्राध्यापक संघ ,बुद्धिजिवि लगायतका पेशागत संघ,सम्थाहरुलाई बोलाएर छलफल चलाउदै छौ । त्यसको मार्ग निर्देशन अनुरुप आन्दोलन तय हुन्छ । यसमा हामीलाई सबैको समर्थन रहनेमा हामी आशावादी छौ । समुन्नत महानगर र विराटनगरको पक्षमा अन्तिम लडाइ लड्ने उद्घोष हामीले गरेका छौ ।
नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४०० नाघ्यो
मोरङका ३२ सहित प्रदेश एकमा ५९ जनामा संक्रमण पुष्टि
आज थपिए १२०४ नयाँ संक्रमित, १४४७ जना डिस्चार्ज